Kangaroo nkume bench
PetrPikora.com on July 27, 2019
Nkume Klokočské bụ ihe ndobere anụrị. Nke 918 na Jičínská pahorkatina, ọdịda anyanwụ nke obodo Klokočí na mpaghara Semily na Liberec Region. AOPK ČR - mpaghara na Liberec na-ahụ maka mpaghara ahụ. Ebe nchekwa uwa dị na mpaghara Bohemian Paradise echekwara Landscape, saịtị nke Jizera Breakthrough n'akụkụ Austria na Bohemian Paradise Geopark.
Nkume Klokoč wee wuo obodo nke okwute na nsọtụ nke Kuest site na sandstones quartz sandstones nke Upper Turon ruo Coniak, kpọpụrụ isi na ndịda ọdịda anyanwụ. Isi ihe kachasị elu (458 m asl) dabeere na nhazi usoro agọnarị na ndịda ọwụwa anyanwụ. Ebiputara uzo di nkpa ulo nke Kuesta na etiti na akuku ndida akuku site na otutu ulo sufos, na elu nkpoda enwere ulo elu, ogidi na mgbidi okwute nke nwere ogwugwu ukwu. N'ebe ụfọdụ, a na-enwe nnukwu niche, ọgba ndị nwere pseudo (ọtụtụ n'ime ha dị mkpa ma bụrụkwa ihe mgbe ochie) na oke olu. A na-ejikarị apịhịa okwute eme ya, mgbe ụfọdụ enwere ya. N'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ bụ mkpọmkpọ ebe nke nnukwu ụlọ mgbidi Rotštejn. Enwere ihe ndị na-arị elu. Site na ahịrị okwute dị n'okirikiri gbadara na NW - SE enwere echiche ndị dị anya nke ugwu ugwu n'akụkụ oke Roven.
A na-akpọ Klokoč Kuesta dị ka "akwụkwọ ọgụgụ geomorphological", ebe obere mpaghara a na-egosi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enyemaka enyemaka nkume. Emekwara Klokoč Rocks dị ka mpaghara ala dị mkpa nke obodo.
N'okpuru aha Klokočská kuesta ọ bụkwa akụkụ nke geomorphological nke nke ndị Jičínská pahorkatina dum, sub-Turnovská pahorkatina, district Turnovská stupňovina na podokrsko Klokočsko-rovenské kuesty.